प्रचण्डको प्रश्न – पार्टी बलियो भएको बेला केही गर्न सकेनौं भने के भनेर भाषण गर्ने ?
काठमाडौं– नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनचाहना अनुरुप काम गर्न नसके जनताले आगामी दिनमा नपत्याउने बताएका छन् ।
चितवन जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो जिल्लासभा उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीको उपस्थित बलियो भएको बेलामा पनि काम गर्न नसके त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताएका हुन् ।
‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीले जितेको छ । यस्तो अवसर हुँदा समेत हामीले केही गर्न सकेनौ भने भोलि हामीले गर्न सक्छौं भनेर भाषण गर्दा कसले पत्याउँला ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
प्रचण्डले त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर बन्नु पर्ने बताए ।
उनले हरेक स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता छुट्याउन पर्ने र हरेक स्थानीय तहको एउटा भिजन हुनुपर्ने उल्लखे गरे ।
‘स्थानीय तहमा कस्तो सम्भावना छ, श्रोतको अवस्था के छ ? आवश्यकता कस्ता छन् भन्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेर विश्लेषण गर्नुप¥यो र यसको जानकारी जनतालाई पनि दिन आवश्यक छ’ प्रचण्डले भने ।
असोज ८, २०७५ मा प्रकाशित
मंगलवारको घटनाबारे कांग्रेसले भन्यो– सभामुखको गैरउत्तरदायी कार्य !
लोक सेवा ‘सर्भर डाउन’ भएर फारम नभरिएपछि म्याद बढाउन माग गर्दै प्रदर्शन
कांग्रेसको विरोधपछि रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री सम्बोधन नगरी फर्किए
गुठी विधेयक विवाद सल्ट्याउन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, माधव नेपालले पनि गरे छुट्टै छलफल
भाषा बिगारेकोमा ओलीको टिप्पणी : हाम्रा टेलिभिजनले तपाईं भन्न कसैलाई जान्दैनन् !
लघुवित्तका कर्मचारीको हत्या, जंगलको बीचमा शव फेला